Eriri Optic 12 Agba Pigtail
Female ka nwoke Attenuator
Online Kemeghi Attenuator
Eriri Optic PLC Splitters
Eriri Optic Tranceiver
Mejuputa mmụọ nke ISO 9001 ọkọlọtọ. Site na oruru nke mgbe niile
innovated na nọgidere mma technology na àgwà management usoro, na-agbalịsi ike ka Rut na àgwà na-enwe ọganihu na ụwa-klas àgwà.
Were n'ụzọ zuru ezu ihe nweta nke ahịa mkpa na-atụ anya dị ka a ihe mgbaru ọsọ na-achụ; ịzụlite na-enye ngwaahịa na izute chọrọ nke iwu na ụkpụrụ na ahịa mkpa bụ a na-agbanwe agbanwe ebumnuche; na-egosipụta njide onwe onye, ​​itinye na-arụ ọrụ, na mma kwa usoro bụ nkwa nke Company si na onye ọ bụla na-arụ.
-Akwadokwa ọchịchị na-ege ntị mkpa nke ndị ahịa, na-enye ezi ọrụ, na-enwe ezi na ime ihe n'eziokwu aha, dị ka ndị Company si nọgide mmepe nke nkwa.
General Manager ana achi achi na àgwà iwu ga
1. imeghari ka Company nzube.
2. Gụnye nkwa nzute chọrọ na nọgidere rụọ irè nke quality management usoro.
3. Nye a kpuchie maka mmepe na review nke àgwà na ebumnobi.
4. Ka gwara na-aghọta n'ime Company.
5.-enyocha site management reviews ịnọgide na-enwe kwesịrị ekwesị na imeta-aga n'ihu mma.
1. The General Manager ana achi achi na àgwà na ebumnobi na-guzobere mkpa ngalaba nke Company na dị iche iche management etoju. The quality ebumnobi kwesịrị measurable na-agbanwe agbanwe na àgwà iwu. Ná mmalite nke n'afọ ọ bụla, dị ka kpuchie nke quality iwu na ihe nweta nke gara aga afọ quality ebumnobi, na Company na-ahazi na formulates na Company isua quality ebumnobi, nke a ga-tọhapụrụ na emejuputa atumatu mgbe ihu ọma site na General Manager.
2. Mid-okwu (afọ atọ) Quality Goals
A. Mmụba ≥ 98%
B. Product laghachi ọnụego ≤ 1.5%
D. ahịa afọ ojuju ≥ 85% ma ọ bụ karịa
The General Manager jide n'aka na niile quality eme nke Company bụ isiokwu chọrọ nke a Quality Policy. Ọ bụla mebiri nke quality iwu na àgwà na ebumnobi ga-ata ya ahụhụ iji hụ na Company si ngwaahịa mma na ọrụ àgwà nwere ike n'ụzọ zuru ezu igbo ahịa.
Ekwentị: (0755) 28169892